ရဲဘော် ဖိုးသံချောင်းနှင့် လက်ရှိနိုင်ငံရေး အခြေအနေအပေါ် ဆက်သွယ် မေးမြန်းချက် | Freedom News Group
ရဲဘော် ဖိုးသံချောင်းနှင့် လက်ရှိနိုင်ငံရေး အခြေအနေအပေါ် ဆက်သွယ် မေးမြန်းချက်
by FNG on September 18, 2012	(သတင်းထောက် ကိုညို က ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ပြောခွင့်ရ ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်းနှင့် လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေအပေါ် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်)
မေး။ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီဝင်၊ စစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ် ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်ချုပ် ကျော်ဇောကို ပါတီခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ အသိအမှတ်ပြုမခေါ်တာ ဘာကြောင့်လို့ထင်မြင်လဲ?
ဖြေ။ ကျနော်တို့ အမြင်မှာက ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဇော ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တည်ရှိနေတာက ကြာလှပြီ။ အရင်တုန်းက ဗိုလ် ချုပ်ကျော်ဇောဟာ ကျန်းကျန်းမာမာ၊ သွားနိုင်လာနိုင်၊ ပြောနိုင်ဆိုနိုင် သွက်သွက်လက်လက်ပဲ၊ အဲလိုအချိန် တုန်းက အစိုးရအဆက်ဆက်ဟာ ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဇော မြို့ပေါ်ကိုပြန်လာမှာ သိတ်ကြောက်တယ်။ ဗိုလ်ချုပ် ကျော်ဇောရဲ့စကား၊ ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဇောရဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေဟာ ပြည်သူလူထုကြားမှာ ဘယ်လောက်သြဇာရှိ နေတယ်ဆိုတာ သူတို့သိနေတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဇောကို သူတို့စကားထဲ ထည့်မပြောရဲဘူး။ အခုကျမှ မသွားနိုင်မလာနိုင်၊ မပြောမဆိုနိုင် (ကျန်းမာရေးက သိတ်ကိုဆိုးနေပါပြီ) ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဇော အနေနဲ့ ရန်ကုန်ကိုသွားဖို့တောင်၊ မရောက်နိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးရှိမှန်းသိတော့မှ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆိုပြီး နာမည်ကောင်း ယူပြီးခေါ်တာပါ။ ကျနော်ကတော့ ဒါဟာ ရိုးသားတဲ့စေတနာနဲ့ အပြုအမူလို့ မထင်ပါဘူး။
မေး။ သူ့ကိုနာမည်ပျက်စာရင်းကနေ ပယ်ဖျက်လိုက်ပြီလား?
ဖြေ။ နာမည်ပျက်စာရင်း ပယ်ဖျက်တဲ့ထဲမှာတော့ မတွေ့ဘူးလေ၊ သူတို့စာရင်းထဲရှိမရှိတော့ ဘယ်သူမှမသိ နိုင်ပါဘူး၊ သူတို့ခေါင်းထဲ ရှိတဲ့အရာတွေပဲလေ။
မေး။ အစိုးရရဲ့ ပြည်တော်ပြန်ဖိတ်ခေါ်ချက်တွေကိုရော ဘယ်လိုသဘောထားရှိလဲ ?
ဖြေ။ အခုဟာအစိုးရက အနောက်ဘက်ကို မျက်နှာမူတဲ့ကာလ။ ဒီအတွက် သူတို့လုပ်ငန်းတွေ ထိရောက် အောင်မြင်ဘို့အတွက် လှမ်းတဲ့ခြေလှမ်းတရပ်လို့ ကျနော် ထင်တယ်။ တကယ့်တကယ် စေတနာရှိတယ်ဆိုရင်၊ အဖြူအမဲခွဲမနေဘဲ၊ အားလုံးပြန်လာကြဆိုပြီး၊ ရိုးရိုးလေး တခါးဖွင့်ပေးလိုက်ဖို့ပဲ ရှိတယ်။ အခုကျတော့လဲ
အထဲဝင်လာသူတွေနဲ့ ဦးအောင်မင်း (သမတရုံးဝန်ကြီး) နဲ့ စက်တင်ဘာ ၂ ရက်နေ့က တွေ့တော့၊ ခင်ဗျားတို့ ခေါင်းပဲဝင်လာပါ၊ ကိုယ်တော့ဝင်မလာပါနဲ့လို့ ပြောတယ်။ အဲဒါ အတော်ဆိုးတဲ့ဟာပဲ။ နောက်ပြီး သူတို့ကို သိက္ခာကျအောင် မပြောရဘူးဆိုတဲ့ တောင်းဆိုချက်ကလည်း ရှိသေးတယ်။ ဒါက အကန့်အသပ်တွေနဲ့။ ကျနော်တို့ သိသလောက်ဆိုရင်၊ မသွားခင်သံရုံးတွေမှာ ၀န်ခံချက်လက်မှတ်ထိုးရတာတွေ လုပ်ရတယ်တဲ့။ ပုံ မှန်မဟုတ်ဘူးဗျ။
မေး။ ပြည်တော်ပြန်နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ခရီးစဉ်ကနေ ဘာအကျိုးအမြတ်တွေ ရလာလိမ့်မယ် မျော်လင့်ရသ လဲ?
ဖြေ။ ဘယ်သူ့အတွက် အကျိုးအမြတ်လဲလို့ ကြည့်ရမှာဘဲ။ သူတို့တဦးဆီအတွက်၊ တချို့လူတွေအတွက် အ ကျိုးအမြတ်ကတော့ ရှိကြမှာပေါ့။ ဗမာပြည်၊ ပြည်သူလူထုအတွက် အကျိုးမရှိပါဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့.. သူတို့ ရောက်သွားတဲ့အတွက် အထဲမှာလည်း ရှုတ်ရှုတ်ထွေးထွေး စကားများတာတွေဖြစ်ကြ၊ သူတို့ကိုယ်တိုင်လဲ အ တိုက်အခိုက်ခံရ၊ အခုထက်ထိကိုပဲ၊ သူတို့ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ကြ၊ ကျနော်ထင်တယ်၊ သိတ်မထူး ပါဘူး၊ အစိုးရနဲ့လည်း ထူးထူးထွေထွေ၊ နိုင်ငံရေးစကား၊ ပေါ်လစီစကားပြောရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အမြတ်က အစိုးရပဲရလိုက်တာပါ။
မေး။ ၁၉၈၈တုန်းစစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေး၊ ဘုံရန်သူချေမှုန်းရေးဆိုတဲ့ တူညီတဲ့ ဘုံလမ်းစဉ်တွေရှိခဲ့ တယ်။ ဒီကနေ့ကာလက ဘုံလမ်းစဉ်ပျောက်ပြီး၊ ပါတီတွေ၊ အတွင်းအပြင် ကျောင်းသားတွေအကွဲကွဲ အပြား ပြားနဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကူးအစီအစဉ်၊ လမ်းစဉ်ချပြီးလုပ်နေကြတယ်။ ဒီအပေါ် ဗကပ ကရော ဘယ်လိုသုံးသပ်မိလဲ?
ဖြေ။ အရင်တုန်းက ကျနော်တို့ပါတီက ၁၉၃၀ ပြည့်အရေးတော်ပုံ အနှစ် ၄၀ မြောက်အနေနဲ့၊ ဗမာပြည်မှာ စစ် အာဏာရှင်စနစ်ကို ပြောင်းလဲဖို့လုံးပမ်းကြရအောင်ဆိုပြီး ကျနော်တို့ ပါတီခေါင်းဆောင်တွေကနေပြီးတော့ ပြည်တွင်း နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကို၊ လှမ်းပြီး စာရေးဆက်သွယ်ပါတယ်။ ဒီအတိုင်း ကျနော်တို့တတွေ ဆက်သွားလို့ မဖြစ်တော့ဘူး ဆိုပြီး၊ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း၊ ဦးနု၊ ဦးဘဆွေ၊ ဦးကျော်ငြိမ်း အကုန်လုံးကိုစာတွေ ပေး ခဲ့တာ။ တုန့်ပြန်မှုအမျိုးမျိုးရခဲ့တယ်။ နိုင်ငံရေးအစဉ်အလာရှိသူတွေလည်ဒတက်တက်ကြွကြွနဲ့ အမျိုးအမျိုးမျိုး တုန့်ပြန်ကြတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ကြီးကပဲ အဲဒါကိုယူပြီး ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းကို သွားတိုင်ပါတယ်။ ကွန်မြူနစ်တွေ ဒီလို လုပ်နေပြီဆိုပြီး မျက်နှာလုပ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ အပြုသဘောတုန့်ပြန်ကြပါတယ်။
အလားတူ ကျနော်တို့ဟာ စာပေပညာရှင်တွေ၊ အနုပညာရှင်တွေနဲ့ နိုင်ငံရေးသမားဟောင်းတွေ၊ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေကို အဲလိုအနက်အဓိပ္ပါယ်မျိုးစာပါတဲ့ ပို့စ်ကဒ်တွေပို့ပြီး လှုံ့ဆော်ပါတယ်။ အဲဒီကနေ တဖြေးဖြေးလှုံ့ဆော်လာခဲ့တာ၊ တူညီတဲ့ရည်မှန်းချက်ကြီးကို အားလုံးဝိုင်းဝန်း လှုပ်ရှားကြဖို့လှုံ့ဆော်ရင်း ဆက် ပြီး အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တာပါ။ ပေါ်လည်းပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ အခုန ကိုညို ပြောသလိုပဲ၊ တူညီတဲ့ရည်မှန်းချက်မရှိဘူး ဖြစ်နေတယ်။ အ တော်လေး ကွဲပြားနေတယ်ပေါ့လေ။ ဒီလိုအချိန်မှာ ကျနော်ထင်တယ်၊ အခြေအနေရဲ့ လိုအပ်ချက်အရ၊ တူညီ တဲ့ ရည်မှန်းချက်အတွက် လှုပ်ရှားတဲ့ အင်အားစုတွေပေါ်လာမှာပဲ။ အားလုံး၊ ဗမာပြည်သူလူထုနဲ့၊ နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေက အတွေအကြုံအစဉ်အလာ ရှိပြီးသား၊ အဲလိုလုပ်မှရမယ်ဆိုတာ သိပြီးသား အဲဒီဆီကို ဦး တည်လျှောက်ကြမှာပဲ၊ ကျန်နေရစ်ခဲ့သူတွေလည်း ကျန်ခဲ့မှာပဲ။
လောလောဆယ် ကျနော်ကတော့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို လက်ခံသူနဲ့၊ လက်မခံသူ အဲလိုကွဲနေတယ်လို့ ကျနော် ထင်တယ်။ (ဒါပေမဲ့ လက်ခံသူထဲမှာလည်း ခြွင်းချက်ထားလက်ခံသူတွေလည်း ရှိသေးတာပေါ့လေ)
ဘာပဲပြောပြော၊ ကျနော်တို့ ဗမာပြည်ကို ဖျက်ဆီးအနှောင့်အယှက်ပေးမှာက၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံပဲ။ အဲဒါကြီးဖျက် သိမ်းရေးအတွက် တူညီတဲ့ အင်အားစုတွေ ပြန်စုစည်းလှုပ်ရှားကြတာ (အမြဲတမ်း အဲဒီကြွေးကြော်သံကြီးကိုင် ပြီး အော်နေရမယ် မဆိုလိုပါဘူး) သဏ္ဌာန်အမျိုးမျိုးနဲ့
လှုပ်ရှားမှုဖော်ထုတ်လုပ်ကြရမှာပါ။ ခက်ခဲကောင်းခက်ခဲမှာပါ။ ကြာကောင်းကြမယ်၊ စိတ်ကူးယဉ်သလို လွယ် လွယ်နဲ့တော့ မရပါဘူး။
မေး။ အစိုးရရဲ့ ဒီမိုကရေစီဘက် ဦးတည်ရွေ့လျားနေပြီဆိုတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေအပေါ်မှာ ဗကပ အနေနဲ့ဘယ် လိုမြင်လဲ?
ဖြေ။ ကာတွန်းတခုထဲတွေ့လိုက်ရသလိုပဲ၊ ကရွတ်ကင်းလျှောက်နေတာပါ။ ရှေ့ကိုမတက်ပါဘူး၊ အဲဒီနားလေး လှည့်ပတ်ပြီး အမျိုးမျိုးလုပ်ပြနေတာပါ။ သူတို့အနေနဲ့ လောလောဆယ် နိုင်ငံရေးအရ၊ ၀ါဒဖြန့်ချိရေးအရ အပေါ် စီးရနေတာတော့ အမှန်ပဲ။ ဒီအတိုင်းဆက်သွားပြီး၊ ပြည်သူလူထုဘက်ကနေ ပြောင်းလဲတာမျိုးမလုပ်နိုင်ဘူးဆို ရင်
ဗမာပြည်မှာ၊ အငြိမ်းစားဗိုလ်ချုပ်တွေ တယောက်ပြီးတယောက်လဲပြီး သမ္မတလုပ်တာပဲ တွေ့ရမှာပါ။ ပြီးတော့ ဓနဥစ္စာတွေလည်း၊ ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ၊ ခရိုနီတွေလက်ထဲမှာပဲ ရှိနေအုံးမှာပါ။ ကြာလေ သူတို့ပဲချမ်းသာလေ၊ လယ်သမားတွေရဲ့လယ်မြေဆုံးရှုံးလေပဲ ဖြစ်နေမှာပါ။
မေး။ အတွင်းအပြင်အလုပ်နဲ့ အတွေးအခေါ်ကွဲပြားမှုလားတော့ မသိဘူး၊ ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ ကြားမှာရော၊ နောက် ဗကသ ကျောင်းသားအဖွဲ့တွေလည်း ကွဲနေတဲ့သတင်းတွေ ကြားနေရပါတယ်။ ဘယ်လို မြင်လဲ?
ဖြေ။ မတူတာ၊ ကွဲတာတွေကတော့ သိတ်မဆန်းပါဘူး၊ ဘယ်နေရာမှာမဆို ပေါ်နေတာပဲ။ သူတို့ချင်း ကွဲတယ် ဆိုတော့၊ နဂိုကရော ကိုမိုးသီး တို့၊ ကိုမင်းကိုနိုင် တို့ သိတ်အကြာချည်း စုစုစည်းစည်းရှိခဲ့တာ မဟုတ်ကြပါဘူး။ ပါတီအဖွဲ့အစည်းလို တစုထဲရပ်တည်ခဲ့ကြတာ မဟုတ်ဘူး။ လှုပ်ရှားမှုထဲမှာ သူတို့အတူပါခဲ့ကြ၊ စုစည်းမှုရှိကြ၊ အဲဒီလိုရှိခဲ့တာပါ။ ဆိုတော့..အခုလို နိုင်ငံရေးလေထုကြီးကအစ အပြောင်းအလဲတွေ တိုက်နေတဲ့ အချိန်မှာ၊ (အပြောင်းအလဲဆိုလို့ တကယ့်အခြေခံ၊ အနှစ်သာရအပြောင်းအလဲကို ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး)ကျန်တဲ့ဟာတွေ လိုက်ပြီးပြောင်းလဲကြတာ သိတ်မဆန်းပါဘူး။
ဗမာပြည်သမိုင်းမှာ၊ အရင်တုန်းကလဲ (လွတ်လပ်ရေးရပြီး နောက်ပိုင်း) ကွဲကုန်တာတွေ ရှိတယ်။ သမဂ္ဂတွေ ထဲမှာလည်း၊ ကျောင်းသားတွေထဲမှာလည်း ကွဲဒါမျိုးတွေတော့ ရှိကြတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီဟာတွေထဲကနေပြီး တိုးတက်မှုရှာနိုင်ဖို့ လိုတယ်လို့ ထင်တယ်။ အရင်တုန်းလည်း ကျောင်းသားတပ်ဦးဆိုတာ ရှိတယ်၊ နောက် ဖဆပလ က မွေးထားတဲ့ ဒီအက်စ်အို လို အဖွဲ့အစည်းလည်းပေါ်လာတယ်။ အဲလိုအဖွဲ့ကွဲတွေပေါ်လာပြီး မတူ ညီတဲ့ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု ကျောင်းဝင်းထဲမှာ အကြီးအကျယ်ပေါ်လာတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကျောင်းသားတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတော့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂက မှန်မှန်ကန်ကန် ရှေ့ဆက်ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဗျ။ အဲဒီတော့
အခုလည်း အကွဲတွေဘယ်လိုပဲရှိရှိ ရှေ့ဆက်လှုပ်ရှားနိုင်မဲ့အရာတွေ ဖော်ထုတ်ရမယ်၊ ရှာဖွေရမယ်လို့ ကျနော် မြင်တယ်။ အဲဒါကပိုအရေးကြီးတယ်။ ကွဲတာက သဘာဝတမျိုးလို ဖြစ်နေပြီ၊ တားမရဘူး။ အဲဒီအကွဲထဲကနေ အကောင်းဆုံး ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာက အရေးကြီးတယ်။
မေး။ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကိုရော.. သမတဦးသိန်းစိန်အစိုးရက တခြားနယ်စပ်အခြေစိုက် အဖွဲ့တွေလို၊ ဆွေးနွေးညှိနိုင်းဘို့ ကိုယ်စားလှယ်လွှတ်တာမျိုး၊ ကမ်းလှမ်းတာမျိုး ရှိလား?
ဖြေ။ အခုထက်ထိတော့ မရှိသေးပါဘူး။
ဖြေ။ ဒါက သူတို့လုပ်နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလက္ခဏာကို ဖော်ပြတဲ့အချက်တချက်လို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။ သူတို့က တပြည်လုံးပြေလည်မဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာထက်၊ သူတို့အတွက်အကျိုးရှိမှ လှည့်လုပ်နေတာပါ။ ကျနော့်အထင် ဒီငြိမ်းချမ်းရေးတွေဟာ သိတ်ပြီးတော့ မြဲနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ အခုရထားတဲ့ သဘောတူညီချက်တွေအရ ဆို၊ စစ်အစိုးရလက်ထဲမှာ အကုန်ရှိနေခဲ့တာပဲ။ ဆိုလိုတာက အချိန်မရွေး စစ်ကိုပြန်ဖန်တီးလို့ရတယ်။ သူတို့ ဖန်တီးလိုက်ရင် ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေက လက်နက်ရှိပြီး ခံဘို့ပဲရှိတယ်။ စစ်အစိုးရ အဲလိုလုပ်နိုင်တာကို ကြိုပြင် ထားတာဆိုလို့၊ ၀၊ မုန်းလား၊ အဲဒီ ၂ဖွဲ့ပဲရှိတယ် ထင်တယ်။ ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေ နောင်ဆိုလို့ရှိရင် စစ်အစိုးရပြုသမျှနုရတော့မဲ့အခြေအနေရောက်သွား မယ်ထင်တယ်ဗျာ။
မေး။ တချိန်က ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီထဲမှာလည်း ဖြုတ်ထုတ်သတ် ပြဿနာတွေ ရှိခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒီဘက် နောက်ပိုင်း မြောက်ပိုင်းဒေသ ကချင်ဘက်မှာလည်း ကျောင်းသားတပ်မတော်အတွင်း စွတ်စွဲလုပ်ကြံသတ် ဖြတ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်။ ဘယ်လိုသုံးသပ်ချင်သလဲ?
ဖြေ။ ဖြုတ်ထုတ်သတ်လို့ ကျနော်တို့ ပါတီက မခေါ်ဘူး။ အဲဒါ စစ်အစိုးရက ပေးထားခဲ့တဲ့ နာမည်၊ ကျနော်တို့ ပါတီကတော့ ပါတီတွင်းတော်လှန်ရေးလို့သုံးနှုံးခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျနော်တို့က တရားဝင်ပဲမှားတယ်၊ မလုပ်သင့်တဲ့ဟာလို့ ပြောပြီးပြီ။ ကြုံရင်လည်း ကြုံသလို ပြောနေတုန်း။ ဟိုအဖွဲ့အစည်းမှာဖြစ်တဲ့ သူတို့အတွင်း ရေး ကျနော်တို့ မသိဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီကိစ္စ စပေါ်နေပြီး အရေးယူတာတွေဘာတွေ လုပ်နေပြီး ဖမ်းတာဆီးတာ လုပ်နေတာကို ကျနော်တို့ ကြားတယ်။ သတ်တဲ့အဆင့်တော့ မရောက်သေးဘူး။
အဲဒီသတင်းကြားလို့၊ ကျနော့် ပါတီကနေ ကျနော့်ကိုလွှတ်တယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင် သွားပြီးပြောတယ်၊ အဲဒီ မှာ။ အဲဒီထဲက ခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးနဲ့ ကျနော် တွေ့တယ်။ တွေ့ပြီးတော့ ကျနော် ပြောတယ်။ ဒီလိုမ လုပ်သင့်ဘူး၊ ကျနော်တို့ ပါတီဟာ၊ ပဲခူးရိုးမမှာ ပါတီတွင်းတော်လှန်ရေးလုပ်ခဲ့တယ်၊ အဲဒီတုန်းက တကယ်တမ်း ပါတီကအရေးယူလိုက်တာ လူ ၂၀ တောင် မရှိဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ပါတီတခုလုံးအတွက် နစ်နာသွားတယ်။ အဲဒီတော့ ခင်ဗျားတို့လည်း အဲလိုမဖြစ်စေချင်ဘူး၊ မဖြစ်ပါနဲ့လို့ သွားပြောခဲ့တယ်။ အဲလို ကိုယ့်အတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာကို သွားပြောခဲ့တာပါ။ သူတို့က နားထောင်ထားလိုက်တာကလွဲလို့ ဒီထက်မပိုပါဘူး။ တက်တက်ကြွကြွ နားထောင် တဲ့သဘောတောင် မရှိပါဘူး၊ ၀တ်ကြေတန်းကြေ နားထောင်တဲ့ သဘောလောက်ပါ။
မေး။ ဒီကနေ့ ဗကပရဲ့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာ ဗမာပြည်ထဲမှာ ဘယ်လိုရှိနေသေးလဲ?
ဖြေ။ အခုကတော့မြေအောက်ပါတီအနေနဲ့ပဲ လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ ရေရှည်မြေအောက်လုပ်ငန်းကို မျော်မှန်းလုပ် နေတာပါ။
မေး။ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ သြဇာကရော ပြည်သူတွေမှာရှိသေးရဲ့လား?
ဖြေ။ အဲဒါကတော့ ပြည်သူတွေကို မေးမှဖြစ်မှာ။
မေး။ မေးစရာ ဒါပါပဲ၊ ဖြည့်စွက်ပြောစရာရှိရင် ပြောပါ။
ဖြေ။ ဗမာပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးမှာ လက်တွေ့ကျတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ကင်းကွာနေသလိုပဲ။ လက်တွေ့ဘက် အာရုံ လှည့်ကြစေလိုတယ်။ လက်တွေလုပ်ငန်းဆိုတာက သမဂ္ဂကြီး ၃ ရပ်ဖြစ်တဲ့ အလုပ်သမားသမဂ္ဂ၊ လယ်သမား သမဂ္ဂ၊ ကျောင်းသား သမဂ္ဂ ဆိုတာတွေ ဖော်ထုတ်ဘို့ တရားဝင်ဖြစ်လာအောင်လုပ်ဖို့၊ အဲဒါက အဓိကပဲ။
နောက်တခုက အဲဒါတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ အလုပ်သမားအခွင့်အရေး၊ လယ်သမားအခွင့်အရေး၊ ကျောင်းသား အခွင့်အရေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ရှားကြဘို့ လိုတယ်လို့ ထင်တယ်။ အခုကျနော်တို့ မြင်နေရတာက နိုင်ငံ ရေးလုပ်တဲ့သူတွေဟာ အဲဒါတွေနဲ့ ရှောင်ကွင်းပြီး နေသလိုပဲ။ ဒါဟာ ဗမာပြည်နဲ့ ဗမာပြည်လူထုဘ၀ တိုးတက် ရေးကို အလှမ်းကွာနေတယ်လို့ ထင်တယ်။
ဓါတ်ပုံ .. သတင်းထောက် ကိုညို
မူရင်း အင်တာဗျူးမှာ နေ့သစ် အင်တာနက် စာမျက် နှာ မှ ဖြစ် ပြီး ကူးယူ ဖော်ပြ ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
From: အင်တာဗျူး	← ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ အမေရိကန် ခရီးစဉ် (Day 1)
Bush: Suu Kyi’s Long Journey to Freedom →
mg ko ko	#
ခောတ်ကုန်နေပြီး..ကိုယ့်လူရေ..ပြောနေတဲ့စကားတွေက စကားကြီး စကားကျယ်လိုဖြစ်နေပြီး.. ဗကပ မှာ အမှားတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ် စစ်အစိုးနှိပ်စက်တာထက်ဆိုးဝါးတဲ့ ပြသနာတွေ အများကြီးရှိခဲ့တယ်၊ ပြီးတော့ ပြည်သူတွေကို သွားမေးမနေနဲ့ စားရိတ်ကုန် လူပန်းမယ် ..ဘယ်သူမှ ဗကပ ကိုအကောင်းမမြင်ဘူး..အလကား အဆိုးမြင် အဖျက်မှောင့်သမားတွေ.. တိုင်းပြည်တိုးတက်အောင် တက်နိုင်သမျှ အနစ်နာခံပြီး အကောင်းဆုံးနည်းနဲ့ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေကိုအားနာဦးမှပေါ့…
September 23, 2012	Comments are closed.
FNG Facebook PageTotal Visitors:Since 16 December 2008	9,572,459 hits